नविन शैलीको सुधार विधि - औषधि प्रयोग नगरीकन नै प्रति हप्ता 15 किलो तौल घटाउने !
मंगलबार, भदौ ३०, २०७७Tue, Sep 15, 2020 १६ : ५० : ३२
स्वास्थ्य प्रणालीमा परिवर्तनहरू - केही विशेषज्ञहरूलाई हटाइनेछ।
नयाँ संसदको गठन कसले गर्ला ?
फार्मेसीहरूले मानिसलाई कसरी धोका दिन्छन्
उच्च रक्तचाप - अन्तिम फैसला होईन ! रक्तचापलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनुहोस् !
काठमाडौँका एक लोकप्रिय विद्यार्थीले औषधि, डाईटिङ् वा व्यायाम नगरी साताको 13 किलो वजन घटाउने अचम्मको विधि पत्ता लगाएकोमा उत्कृष्ट स्वास्थ्य पुरस्कार प्राप्त गरे ।
2019 को वसन्तमा एन्डोक्रिनोलजी विशेषज्ञहरूको युरोपियन सम्मेलनमा केही अविश्वसनीय घटना भयो । सम्पूर्ण दर्शकहरूले वक्तालाई 10 मिनेट उठेर ताली बजाउँदै सम्मान व्यक्त गरे । वक्ता बिना घिमिरे काठमाडौँकी विद्यार्थी थिईन् । उनले खाना कम नगरी दुब्लाउन समय नै नलाग्ने एउटा अद्वितीय फर्मुलाको प्रस्ताव गरिन् ।
सम्मेलनमा मन्तव्य दिंदै बिना
बिनाले एउटा उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत गरिन्, जसै विज्ञान केन्द्रहरूले यसलाई तुरुन्त अभ्यासमा ल्याए । एन्डोक्रिनोलजी इन्स्टिच्युट, मेडिसिन एण्ड फार्मेसी युनिभर्सिटी, जीवविज्ञान र पोषण संस्थानको अनुसन्धान र विकासका धेरै विशेषज्ञहरूले यस तयारीको विकास गर्न सुरु गरे । यो सिर्जना भईसकेको छ र यसले उत्कृष्ट नतिजाहरू दियो ।
कसरी नयाँ तयारीले लाखौंको जीवन बचाउनेछ र नेपालका नागरिकहरूले कसरी यो प्रोडक्ट व्यावहारिक रूपमा नि:शुल्क नै प्राप्त गर्न सक्लान् ? - आजै हाम्रो लेखमा पढ्नुहोस् ।
रिपोर्टर : बिनाजी, तपाईं विश्वकै मेडिसिनसम्बन्धी विश्वविद्यालयहरूमा शीर्ष 10 अति बुद्धिमान विद्यार्थीहरूको सूचीमा हुनुहुन्छ । अत्यधिक तौलसम्बन्धी समस्यासँग लड्न तपाईंलाई के कुराले प्रेरित गर्यो ?
मलाई यसको बारेमा सार्वजनिक रूपमा कुरा गर्न मन पर्दैन, यो प्रेरणा व्यक्तिगत थियो । केही वर्ष अघि मेरी आमा अत्यधिक तौलले निम्त्याएको उच्च-रक्तचापको कारणले बित्नुभयो । सबै ठीकठाक नै थियो तर एक रात उहाँलाई सुतिरहेको बेलामा हृदयघात भयो र पीडाले उहाँ बित्नुभयो । उहाँको मृत्यु भयो । मेरी हजुरआमाको पनि यसरी नै मृत्यु भयो । मैले अत्यधिक तौल र वजन घटाउने सम्बन्धित सबै कुराको अध्ययन गर्न शुरू गरें । 90% उदाहरणहरूमा डाइटिङ्, व्यायाम, औषधि तथा लिपोसक्शन स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुने र तिनले समस्यालाई झनै बढाउँछन् भन्ने पत्ता लगाउँदा म तीनछक्क परें । मेरी आमाले पनि झन्डै5बर्षसम्म एरोबिक्सको साथमा सबै किसिमका डाइटहरू अनुसरण गर्नुभएको थियो ।
बिगत3बर्षमा यो बिषयले मेरो पुरै ध्यान तान्यो । वास्तवमा आज लोकप्रिय देखिएको अत्यधिक तौलको समस्याको नयाँ उपचार विधि मैले मेरो थेसिस लेख्ने क्रममा देखा पर्‍यो । मैले केही नयाँ पत्ता लगाएको जस्तो मलाई महसुस भयो तर यसले यतिका धेरै पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ला भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइन ।
तपाईं कस्ता पक्षहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?
वजन घटाउने मेरो विधि सार्वजनिक हुने बित्तिकै मेरो उपाय बेच्नको लागि मलाई धेरै प्रस्तावहरू आए । फ्रान्सेलीहरू पहिलो थिए जसले मलाई 120.000 युरोको प्रस्ताव गरेका थिए । हालसालै, अमेरिकाबाट एउटा कम्पनीले मलाई 35 मिलियन अमेरिकी डलरको प्रस्ताव राख्यो l मैले मेरो फोन नम्बर परिवर्तन गरें र म अब सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्दिन किनकि मलाई हरेक दिन अफरहरूले वाक्क बनाउँछ ।
जहाँसम्म मलाई थाहा छ, तपाईंले अझै उक्त फर्मुला बेच्नुभएको छैन ?
अहँ, छैन । अनौंठो लाग्न सक्छ तर मैले त्यस्तो फर्मुला नै बनाएको छैन छैन ताकि विदेशमा मानिसहरूले यसबाट पैसा कमाउन सकून् । यदि मैले देश बाहिर उक्त फर्मुला बेंचे भने के हुन्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? उनीहरूले अधिकार प्राप्त गर्नेछन्, र अरुले तयार गरेको यो प्रोडक्टलाई प्रतिबन्धित गर्नेछन् र यसको मूल्यले आकास छुनेछ । म भर्खरकै छु तर मूर्ख छैन । यसरी नेपाली जनताले समस्या समाधान गर्ने उपाय प्राप्त गर्दैनन् । एक जना विदेशी डाक्टरले मलाई त्यस्तो प्रोडक्टको मूल्य कम्तिमा 3,000 पाउन्ड पर्ने कुरा बताए । अचम्म ! नेपालका कति मानिसए यसको लागि 3,000 पाउन्ड तिर्न सक्छन् ?
त्यही भएर मैले यस प्रोडक्टको विकासमा भाग लिने निमन्त्रणा तुरून्त स्वीकार गरें । मैले एन्डोक्रिनोलजी संस्थान, मेडिसिन एण्ड फार्मेसी विश्वविद्यालय, जीवविज्ञान र पोषण संस्थानमा अनुसन्धान एवं विकासका महान विशेषज्ञहरूसँग सहकार्य गरेको छु । एउटा गज्जबको अनुभव । हालै क्लिनिकल अध्ययनहरू पूरा भइसकेका छन् र मानिसहरूको लागि यो प्रोडक्ट उपलब्ध छ ।
प्रोडक्ट विकासको संयोजकमा ब्रिटिश एंडोक्राइनोलजिस्ट, MPU शिक्षाविद् सोफी मोरिसन थिईन् । हामीले उनलाई नयाँ प्रोडक्ट तथा भविष्यका योजनाहरूको बारेमा हामीलाई बताउन आग्रह गर्‍यौं ।
रिपोर्टर : बिनाको फर्मुलामा के कुरा समावेश छन् ? के यसले हामीलाई डाइटिङ् र खेलकुदबिना नै वजन कम गर्न सक्षम बनाउँछ ?
बिनाको विचार सवारीमा जीपीएस राख्नु जस्तै हो - यसले हामीलाई तौल घटाउने सबभन्दा छोटो तरिका देखाउँदछ । यसबाहेक, यो विधि जीवनभर प्रभावकारी छ ।
बिनाको सूत्रमा आधारित रहेर बनेका प्रोडक्टहरूमा सुपर एन्टीओक्सीडन्टहरू हुन्छन् जसले मस्तिष्कको एक भाग (सेरेब्रल एमिग्ड़ेल) मा क्यालोरी, सबक्युटनियस फ्याटलाई जम्मा गर्न रोक्न र 'अस्वस्थकर खानाहरू' को रुचीलाई दबाउन संकेत पठाउँछन् । यसलाई Green Coffee भनिन्छ ।
Green Coffee - तपाईंले लगातार7दिनसम्म लिनु पर्ने एउटा प्रोडक्ट हो । एउटा बाकसमा 25 रसहरू हुन्छन् ताकि वजन 10 गुणाले घट्न थाल्छ ! यस प्रोडक्टले मेटाबोलिजमलाई तिव्र बनाउँदछ, इन्डोक्राइन प्रणालीका कार्यहरू पुनर्स्थापित गर्दछ र तन्तुलाई पुनरुत्थान गरेर भोकलाई रोक्छ। यो प्रोडक्ट 100% प्राकृतिक छ र यसले सक्रिय रूपमा मानव शरीरमा प्राकृतिक प्रक्रियाहरू उत्तेजित गर्दछ। फ्याट मेटाबोलिजमको परिणामस्वरूप वजन घट्छ डाइटिंङ् त विगतमा गरिन्थ्यो । परिणामस्वरूप - समस्या क्षेत्रहरूमा रहेको फ्याट 50 ग्राम/24 घण्टाको दरमा स्थायी रूपमा नष्ट हुन्छ !
यहाँ Green Coffee परीक्षणमा भाग लिने व्यक्तिहरूका नतिजा छन् :
Green Coffee प्रयोगको 28 दिन पछिको परिणाम
Green Coffee प्रयोगको 14 दिन पछिको परिणाम
Green Coffee प्रयोगको 21 दिन पछिको परिणाम
रिपोर्टर : गज्जब ! के तपाईंको प्रोडक्ट फार्मेसीहरूमा पनि उपलब्ध हुनेछ ? साँच्चै यसको कति पैसा पर्ला ?
हामीले वास्तवमै एउटा प्रभावकारी प्रोडक्ट सिर्जना गर्यौं भन्ने उनीहरूले महसुस गर्ने बित्तिकै हामीलाई फार्मेसीहरूले नै सबै सम्भावित तरिकाहरूमा हमला गरे, तपाईंले यो कुरा पहिल्यै याद गर्नुभएको होला। उनीहरूले बिनालाई उनको फर्मुला बेच्न प्रस्ताव गरे । तर उनीहरू यो उत्पादन गर्न चाहँदैनथे । यसको विपरित उनीहरू बजारमा यो प्रोडक्टको सुरुवात रोक्न चाहन्थे । मोटोपनाको उपचार विश्वव्यापी फार्मास्यूटिकल बजारको सबैभन्दा ठूलो अंश हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र यस्ता प्रोडक्टहरूको बिक्रीले लाखौं डलरको नाफा सिर्जना गर्दछ । हाम्रो प्रोडक्ट नाटकीय रूपमा यस स्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्षम छ । प्रभावहीन तौल घटाउने विधिमा कसले पैसा खर्च गर्छ यदि उनीहरूले एक कोर्स Green Coffeeकिन्न सक्छन् भने र स्थायी रूपमा अधिक वजन को बारे मा बिर्सन सक्छन् भने ?!
फार्मेसी चेनहरूसँगै मिलेर काम गरिरहेका फार्मास्यूटिकल कम्पनीहरूका साझेदार हुन् । त्यसैले बिक्रीको मात्राले तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ। उनीहरू हामी र हाम्रो औषधिको बारेमा सुन्न चाहँदैनन् । यद्यपी यो अत्यधिक तौलको उपचारको लागि नेपालमा जीव विज्ञान तथा पोषण संस्थाद्वारा आधिकारिक रुपमा सिफारिस गरिएको एक मात्र प्रोडक्ट हो ।
रिपोर्टर : यदि यो प्रोडक्ट फार्मेसीहरूमा उपलब्ध भएन भने हामीले यो कसरी पाउन सक्छौं ?
यदि फार्मेसीहरूले हाम्रो कुरा सुन्न चाहन्नन् भने हामी पनि उनीहरुको मद्दत बिना काम गर्न सक्छौं भन्ने हामीले निर्णय गर्‍यौं । त्यसैले हामीले Green Coffee प्रत्यक्ष वितरण गर्ने निर्णय गर्यौं । व्यावसायिक फार्मेसीहरू जस्ता कुनै बिचौलियाहरू बेगर नै। हामीले केही विकल्पहरूका बारेमा सोच्यौं र सबैभन्दा प्रभावकारी एउटा छनौट गर्यौं । Green Coffee प्राप्त गर्न चाहनेहरुले एउटा ड्रमा भाग लिनुपर्छ जसछि उनीहरूलाई सम्पर्क गरिन्छ, उनीहरुले नि:शुल्क परामर्श प्राप्त गरेपछि यो प्रोडक्ट पाउँछन् । नेपालको जीव विज्ञान तथा पोषण संस्थाको अनुसन्धान एवं विकासको निर्णयद्वारा जो कोहीले यस ड्रमा भाग लिन सक्छ । आजकाल लगभग सबैसँग इन्टरनेट सुविधा छ । कम्प्युटर नै नभए पनि मानिसहरूसँग इन्टरनेट पहुँच भएका फोनहरू छन् ।
इच्छुक जो कोही व्यक्ति यस ड्रमा भाग लिनसक्छ मात्र 18.03.2020 सम्म । यो नेपालको जीव विज्ञान तथा पोषण संस्थाको अनुसन्धान एवं विकासको सहकार्यमा संचालित एउटा अभियान हो ताकि सबैले यस औषधिको बारेमा थाहा पाउन सकून् । हामी यो समाचार एकदम चाँडै फैलिनेछ र सबै निको हुने बिरामीहरूले यसको प्रयोग गर्न सल्लाह दिनेछन् भन्ने आशा गर्दछौं ।
रिपोर्टर : यो प्रोडक्टको कति पैसा पर्छ ?
हालै हामीले नेपालको जीव विज्ञान तथा पोषण संस्थाको अनुसन्धान एवं विकाससँग सम्झौता गर्यौं - क्रेताहरूलाई लगभग पुरै मूल्यको क्षतिपूर्ति दिलाउनको लागि l 90% भन्दा बढी l भाग्यवस भनौं, विशेषज्ञहरू त्यस्ता पूरक केही व्यक्तिहरूको लागि मात्र नभई सबै व्यक्तिलाई उपलब्ध हुनुपर्दछ भन्नेमा सचेत छन् । त्यसको सट्टामा हामीले विदेशमा उक्त फर्मुला नबेच्ने र निर्यात नगर्ने निर्णय गर्‍यौं ताकि यो नेपालमा मात्र उपलब्ध हुनेछ ।
- सावधान ! नक्कली उत्पादनहरुदेखि सावधान !
Green Coffee नेपालमा मात्र उपलब्ध छ जुन 50% सम्मको छुटसहितको चिट्ठामा सहभागी भएर प्राप्त गर्न सकिन्छ
हाम्रो पोर्टलले Green Coffee को छुट प्रदान गर्दछ । आफ्नो भाग्य जाँच्न "SPIN" थिच्नुहोस् । यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने तपाईंले अझ ठूलो छुटको साथ यो प्रोडक्ट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ ! शुभकामना !
छुट ! 7980 ₹
सीमित स्टक भएकाले छिटो अर्डर गर्नुहोस् !
तपाईंको छुट समाप्त हुने समय :
तपाईंको नाम हाल्नुहोस् :
फोन नम्बर हाल्नुहोस् :
Green Coffee अर्डर गर्नुहोस्
यो उत्पादन एक औषधि होईन
तपाईंले Green Coffee को लागि 50% छुट पाउनुभयो !
अफर सीमित भएको कुरा याद गर्नुहोस्
मैले यो लिन शुरू गरेपछि मैले चाहेको जुनसुकै कुरा खाईरहें र पनि मैले 8 किलो तौल घटाएँ । दुब्लाउनको लागि Green Coffee सबैभन्दा राम्रो प्रोडक्ट हो तर यसको राम्रो पक्ष भनेको तपाईंले जिममा पसिना बगाउनु पर्दैन, मलाई त्यसको लागि समय छैन र मन पनि पर्दैन ।
मेरो वजन 82 किलो थियो । जवानीमा म दुब्लो नै थिएँ तर उमेर बढ्दै जाँदा मेरो पेट र ढाडमा बोसो लाग्न थाल्यो । 35 बर्षको उमेरमा मैले मेरो शरीरलाई उही सामान्य अवस्थामा फर्काउन तत्काल केही गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरें । म एक बर्ष जिम गएँ तर आफूले चाहेको आकारको शरीर पाइन । केही हप्ता पछाडि मैले मेरो मेनुमा Green Coffee समावेश गरें, मैले मेरो किशोरावस्थाको शरीर फिर्ता पाएँ । अहिले मैले मेरो शरीरको ख्याल राख्न थालेको छु र केही परेमा Green Coffee साथमै छ नि ।
यो विज्ञापन बडो गज्जबको लाग्यो ! मैले साँच्चै नै यो प्रोडक्ट नि:शुल्क पाएँ !
मैले एउटा स्वास्थ्यसम्बधी पत्रिकामा यसको बारेमा पढेको थिएँ । यो एक प्रसिद्ध एंडोक्रिनोलोजिष्टद्वारा लेखिएको लेख थियो ...
जब तपाईं धेरै लामो समय कुनै कुराको सपना देख्नुहुन्छ र त्यो पाउन असम्भव छ भनेर तपाईंले लगभग विश्वास गर्न थाल्नु हुन्छ, अचम्मै हो नि । यो राम्रो छ ! मेरो 10 किलो वजन घट्यो, अझै घटाउँछु । मेरा साथीहरू छक्क परेका छन्, म डाइटमा छु होला जस्तो लागेर उनीहरू मेरो बारेमा चिन्ता गर्छन् । मैले उनीहरूलाई केही पनि भनेको छैन, आफै पत्ता लगाउन न :))))))
मैले त यो अर्डर गरीसकें !3दिनमा डेलिभर हुन्छ रे, म पर्खिरहेकी छु ।
मैले अर्डर गरिसकें भोलि आइपुग्नु पर्ने हो ।
मैले अर्डर गरें, उनीहरू यो पठाइने पहिला मानिसहरु मध्ये म पनि एउटी हुनेछु भन्ने आशा गर्छु ।
Green Coffee ले मलाई साँच्चिकै बचायो । दुई वर्ष अगाडि मेरो एउटा दुर्घटना भएर र म 8 महिनाभरी थलिएँ । त्यसपछि, मैले वैशाखीको सहाराले हिंड्न थालें तर म खेलकुदमा भाग लिन सक्दैन थिएँ, मसँग तागतचाहिं थिएन तर मोटोपनाले झनै बर्बाद भयो । मैले मेरो साथीबाट Green Coffee को बारेमा थाहा पाएँ । उनले मलाई6प्याक दिएकी थिईन् । मैले धेरै आशा गरेकी थिईन, मैले केवल कोशिश गरिहेरौं भन्ने सोचेकी थिएँ । मैले निर्देशनअनुसार यसको प्रयोग गरें । परिवर्तनहरू पहिलो दिनदेखि नै देख्न थालियो, मेरो वजन त घटेको थिएन तर मैले मेरो शरीरले छिटो काम गर्न थालेको, खाना राम्ररी पचाउन थालेको, मेटाबोलिजममा सुधार हुँदै गएको महसुस गरें । आफ्नो आहारामा केही परिवर्तन नगरी शुरुका 14 दिनमा मैले 10 किलो वजन घटाएँ ! लगभग4हप्तामा घट्यो अरु 19 किलो वजन घट्यो । म धेरै खुसी छु, मेरो साथीले Green Coffee को बारेमा थाहा पाएकोमा म् आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु, यो नभएको भए मैले के गर्थें होला, म 86 किलो थिएँ ।
यी प्रतिक्रियाहरू पढेर मैले पनि यो किन्नु नै पर्ने रहेछ भन्ने महसुस गरेकी छु । म अर्डर गर्नेछु, हुनसक्छ मैले छुट पनि पाउन सक्छु कि ।
मैले अर्डर गरें, अति सजिलो रहेछ । मैले यो2दिनमा हुलाकमार्फत प्राप्त गरें । मुरी-मुरी धन्यवाद !
प्रचार-प्रसारमा भाग लिनुहोस्